Raha tsy mandeha ny Wi-Fi iPad anao dia araho ireto dingana ireto | Vaovao IPhone
Isan'andro aho dia maheno ny olona miteny hoe raha ratsy kokoa noho ny ahy ny takelaka misy azy ireo, fa raha tsy manana Bluetooth izy, raha tsy afaka miantso izy dia raha tsy voaray tsara ny mail ... ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy nahomby ilay fidirana amin'ny Internet tamin'ny alàlan'ny Wi-Fi. Iray amin'ireo olana lehibe ananan'i iDevices ny indraindray tsy mifandray tsara amin'ireo tambajotra Wi-Fi ... ary, anio, saika (ary hamafisiko ny efa ho) samy manana Internet amin'ny alàlan'ny Wi-Fi ao an-tranony ny tsirairay. Amin'ity lahatsoratra ity dia manome tetika maro izahay hanandramana hamaha ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana Wi-Fi iPad anao.
1 Vaovao farany iPad ho an'ny iOS farany
2 Atsaharo indray ny fitaovana raha toa ka tsy mifandray amin'ny tambajotra Wi-Fi izy
3 Avereno ny toe-javatra fifandraisana
4 Avereno ny fitaovana, manomboka amin'ny rangotra
5 Mandehana any amin'ny fivarotana ... ho safidy farany
Vaovao farany iPad ho an'ny iOS farany
Mazava fa ny bibikely isan-karazany dia raikitra amin'ny fanavaozana iOS rehetra. Angamba Apple manamboatra olana mifandray amin'ny tambajotra Wi-Fi isaky ny fanavaozana, ary raha te hanamboatra ny olana amin'ny fifandraisana Wi-Fi izahay raha sanatria ka manidina ... havaozina amin'ny kinova farany an'ny iOS (raha tsy te hitazona ny jailbreak ianao). Amin'ny fotoana maro, ny fifandraisana dia averina amin'ny alàlan'ny fanavaozana avy amin'ny Big Apple.
Atsaharo indray ny fitaovana raha toa ka tsy mifandray amin'ny tambajotra Wi-Fi izy
Raha tsy mahavaha ny olana amin'ny tambajotra Wi-Fi ny fanavaozana ny kinova farany an'ny iOS, dia mamporisika anao aho hamerina ny iPad. Ho an'izany Tsindrio ny bokotra Power sy ny bokotra Home amin'ny fotoana mitovy mandra-pisehoan'ny Apple logo eo amin'ny efijery. Ny famerenana mafy indray indraindray dia mamerina ny fifandraisana.
Avereno ny toe-javatra fifandraisana
Ny dingana manaraka dia ny famerenana ny fifandraisana eo amin'ny iPad. Ho azy:
Sokafy ny fikirana ao amin'ny fitaovanao
Tsindrio ny General
Tsindrio ny Restart
Ary avy eo Avereno ny toe-javatra fifandraisana
Famerenana ny fitaovana dia hitranga ary… tach! Miasa ve ny fifandraisana? Raha tsy izany ... mankany amin'ny dingana manaraka!
Avereno ny fitaovana, manomboka amin'ny rangotra
Raha tsy misy ny dingana teo aloha dia tonga ny fotoana hamerenana amin'ny laoniny ilay fitaovana, hahatonga azy io ho orinasa. Ho an'ity dia mila mampifandray izany amin'ny iTunes ianao ary mamerina azy io, Manoro hevitra ny hametraka ny iPad ho fitaovana vaovao aho satria ny syncing dia mety indraindray tsy mahomby ary manova ny toerana misy ny terminal.
Mandehana any amin'ny fivarotana ... ho safidy farany
Ny iPad dia afaka mitondra aretin'andoha. Raha amin'ny dingana rehetra nolazaiko fa tsy afaka mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ianao dia anjaranao ny maka ny iPad mankany amin'ny Apple Store. Hahita ny lesoka izy ireo ary hilaza aminao ny fomba fanamboarana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » Raha tsy mandeha ny Wi-Fi iPad anao dia araho ireto dingana ireto
Ahoana ny fomba hamahana olana amin'ny iMessage